सीकेले फेस सेभिङका लागि ‘जनमत संग्रहको सम्झौता गरेँ’ भने
(पृथकतावादी धारको नेतृत्व गरेको सीके राउतसँग सरकारले गरेको ११ बुँदे सम्झौतालाई लिएर विभिन्नखाले टीका–टिप्पणी भइरहेका छन् । धेरैले यो सम्झौतालाई असन्तुलित भयो भनिरहेका छन् । तर, तराई÷मधेसलाई नै केन्द्रविन्दु बनाएर राजनीति गर्दै आएको राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) ले भने यसमा औपचारिक धारणा सार्वजनिक गरेको छैन । सम्झौतापत्रका विषयवस्तु र सीके राउतको मूलधारको राजनीति प्रवेशले मधेसमा पार्ने राजनीतिक प्रभावबारे हामीले राजपा नेता लक्ष्मणलाल कर्णसँग कुराकानी गरेका छौं–सम्पादक)
० मधेसको ऐंजेरुको रुपमा रहेको सीके राउतलाई सरकारले मूलधारको राजनीतिमा ल्याएको खुसीयालीमा दीपावली गर्न छाडेर राजपा किन मौन देखिएको ?
–राज्यको बेइमानीले मधेसमा विभिन्न समस्याहरु थुप्रिएर बसेको छ । तथापि, राज्यले विखण्डनकारी मुद्दा बोकेका सीके राउतलाई मूलधारमा ल्याएको छ । हिजो देश टुक्र्याउछु भन्ने व्यक्ति आज संविधान मानेर देशको समृद्धिको यात्रामा सहभागी हुन तयार भएका छन् । राजपा सरकारको सीके राउत कदमको स्वागत गर्छ । तर, जुन नाटकीय घटना भएका छन्, त्यसप्रति भने राजपाको असहमति छ ।
० कस्तो नाटकीय घटना ?
–तपाईं–हामीले देख्यौं, सर्वोच्चले अघिल्लो दिन राउतलाई छाड्ने फैसला ग¥यो । भोलिपल्टै प्रधानमन्त्री केपी ओली र प्रचण्ड मिलेर ११ बुँदे सम्झौता गरे । यसमा ठूलो रहस्य लुकेको हुनसक्ने हाम्रो अनुमान छ ।
० मधेसको राजनीति प्रभावित पार्ने प्रयास ओली–प्रचण्डले गरे भन्न खोज्नु भएको हो ?
–हो, घटनाक्रमले षड्यन्त्रको संकेत गरेको छ । कतै सीके राउतलाई ओली र प्रचण्डले परिचालन गरेका पो हुन् कि भन्ने संशय पनि पैदा भएको छ । आउँदा दिनले यी आशंकाको जवाफ जरुर दिने नै छ ।
० सहमतिकै कतिपय विषयमा प्रश्न उठाइएको छ । सीके राउतले नै पृथकतावादी धार छाडेको घोषणा गरेका छैनन् । कतिपयले सहमति असन्तुलित भयो भनिरहेका छन् । यसको विश्लेषण कसरी गर्नुहुन्छ ?
–मुख देखाउन लाज लाग्यो भने मान्छेले अनेक हत्कण्डा अपनाउँछ । कसैले हातले त कसैले रुमालले मुख छोप्छ । सीके राउतले सरकारसँग सम्झौता गरे पनि आफ्नो मुख छोप्न अर्थात् फेस सेभिङका लागि जनमत संग्रहको सम्झौता गरेँ भनेका छन् । यसो भन्नु उनको बाध्यता हो ।
० तपाईंको मतलब सीके राउत थाकेर सरकारसँग लम्पसार परे भन्ने हो ?
–त्यो त प्रष्ट छ । फेरि राज्यले कागज गर्दैमा त्यो पूरा गर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन । सीकेले पनि यो कुरा बुझेका छन् ।
० मधेसको राजनीतिमा सीके राउतको प्रवेश भएको छ । तपाईंहरु माथि त खतरा आइलाग्यो नि होइन ?
–देशव्यापी नेटवर्क भएका कांग्रेस र नेकपा (पहिले एमाले र माओवादी) ले त हाम्रो अभियानलाई प्रभावित पार्न सकेनन् भने हिजो सीके राउतजस्तो हिजो जन्मेको मान्छेबाट हामीलाई खतरा हुने कुरै भएन । फेरि सीके राउतको विखण्डनवादी कुरामा हामीबीच विगतमा मतान्तर थियो । हामीले विखण्डन छाडेर आऊ भनेर बारम्बार भनेका थियौं । अहिले सीके मति सुधारेर मूलधारमा फर्किएका छन् । यसले हामीलाई खतराभन्दा पनि बरु सजिलो पो बनाएको छ त ।
० राजनीति गर्ने मूल थलो एउटै भएकाले प्रतिष्पर्धामा असर गर्ला कि भन्ने खोज्या ?
–कांग्रेस, एमाले र माओवादीसँग हामीले प्रतिष्पर्धा गर्दै आएका थियौं । मैले अघि नै भनेँ नि हिजो जन्मेका सीके राउतसँग हाम्रो कुनै प्रतिष्पर्धा नै छैन ।
० मूलधारको राजनीतिमा अवरतण गरेको सीके राउतको राजनीतिक भविष्यबारे केही अनुमान गर्न सकिने अवस्था छ ?
–सीके राउत मधेसको फ्रस्टेशनको प्रवृत्ति हो । त्यो प्रवृत्ति केही सच्चिएर आएको छ । तर, त्यसलाई समर्थन गर्ने अवस्था मैले मधेसमा देखेको छैन ।
० सरकारसँग पारपाचुकेको निर्णयचाहिँ किन गर्नुु’भा ?
–सरकारले संविधान संशोधन र मुद्दा फिर्ताको प्रतिबद्धता जनाएको थियो । संविधान संशोधन त गरिएन नै मुद्दा फिर्तामा समेत उदासीनता देखायो । मधेसका लागि लड्ने रेशम चौधरीजस्ता व्यक्तिलाई समेत राज्यले जेल जानुपर्ने अवस्थामा पु¥याएको छ । सरकारले नाजायज काम जारी राखेकाले हामीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता गरेका हौं ।
० रेशम चौधरीको मामलामा सरकार सुरुमा लचक देखिएको थियो । जेलमै रहेको अवस्थामा शपथ गराएको थियो । अब अदालतले गरेको फैसलामा सरकारसँग जोडेर हेर्न मिल्छ र ?
–रेशम चौधरीले देशको संविधान र कानूनले सपथका लागि रोकेको थिएन । त्यसको पालना गर्दै सरकारले उनको सपथ गरायो । यो स्वागतयोग्य कुरा हो । हाम्रो देशको कानूनले राजनीतिक प्रकृतिका मुद्दा फिर्ता लिने व्यवस्था गरेको छ । फिर्ता समयमा लिएको भए अदालतले यस्तो फैसला गर्ने नै थिएन । सरकारको उदासीनता र लापरबाहीले आज यस्तो अवस्थाको सिर्जना भएको छ । मधेसी र थारु समूदायप्रति कुनियत यसले प्रष्ट पारेको छ ।
० गम्भीर मानवअधिकारको घटना भएकाले पो हो कि ?
–एउटा पुलिस र असई मर्नु गम्भीर प्रकृतिका घटना हुन् भने दर्जनौं विस्थापित हुनु के हो ? यसको गम्भीरताबारे प्रष्ट हुन गहिराइमा जानुपर्छ । तर, सरकार त्यसतर्फ जानै चाहेको छैन । घटनाबारे छानबिन गर्न गठित समितिले बुझाएको प्रतिवेदन नै सार्वजनिक नगरी राखिएको छ ।